KEDU IHE MERE OGE KỌMPUTA JI EFU - WINDOWS - 2019
Idozi nsogbu nke ịtọgharịa oge na kọmputa
Ndị ọrụ nke sistemụ arụmọrụ Ubuntu nwere ike ịwụnye ọrụ igwe ojii Yandex.Disk na kọmputa ha, banye ma ọ bụ deba aha na ya, ma jikọọ na faịlụ n'enweghị nsogbu ọ bụla. Usoro nhazi ahụ nwere àgwà nke aka ya ma rụọ ọrụ site na njikwa kpochapụ. Anyị ga-agbalị ịkọwa usoro ahụ dum dịka o kwere mee, kewaa ya n'ime usoro maka mma.
Ịnye Yandex.Disk na Ubuntu
Edobere Yandex.Disk site n'aka ndị ọrụ repositories na ọ bụ ihe dị iche na ịme otu ọrụ ahụ na mmemme ọ bụla ọzọ. Onye ọrụ kwesịrị idebanye iwu ziri ezi na "Njedebe" ma soro ntuziaka enyere n'ebe ahụ, na-edozi ụfọdụ parameters. Ka anyị were ihe niile n'usoro, malite na nzọụkwụ mbụ.
Nzọụkwụ 1: Download ihe ndị dị mkpa
Dị ka e kwuru n'elu, nbudata nke ihe nrụnye sitere n'aka ndị ọrụ repositories. Omume dị otú ahụ nwere ike ime ma site na ihe nchọgharị na site na iwu ndụmọdụ. Nbudata site na ihe nchọgharị weebụ yiri nke a:
Wepu usoro Yandex.Disk kachasị ọhụrụ site n'aka onye ọrụ ntinye.
Pịa na njikọ dị n'elu ma pịa akara kwekọrọ na ya iji budata ngwugwu DEB.
Mepee ya "Ịwụnye Ngwa" ma ọ bụ zọpụta ngwugwu ahụ na kọmputa gị.
Mgbe ịmalite na ngwá ọrụ nrụpụta, ị kwesịrị ị pịa "Wụnye".
Nyochaa site na itinye paswọọdụ akaụntụ gị ma chere ka echichi ahụ mezue.
Ọ bụrụ na usoro a nke enweghị ngwugwu DEB adịghị adabara gị, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị mara onwe gị na nhọrọ ndị ọzọ dịnụ na isiokwu dị iche iche site na ịpị njikọ njikọ na-esonụ.
Ịwụnye ngwugwu DEB na Ubuntu
Mgbe ụfọdụ ọ ga-adịrị mfe ịbanye naanị otu iwu na njikwa ahụ, nke mere na a ga-egbu ihe niile dị n'elu na-akpaghị aka.
Malite site na-agba ọsọ "Njedebe" site na menu ma ọ bụ ikpo ọkụ Ctrl Alt + T.
Tinye ederede n'ime igbenyochaa "debrate //repo.yandex.ru/yandex-disk/deb/ sta main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/yandex.list> / dev / null && wget //repo.yandex.ru/yandex-disk/YANDEX-DISK-KEY.GPG -O- | sudo apt-key add - && sudo apt-get update && sudo apt-get install -y yandex-diskma pịa igodo Tinye.
Dee paswọọdụ akaụntụ gị. Ihe ederede adighi egosi.
Nzọụkwụ 2: Mwepụta mbụ na nhazi
Ugbu a na ihe niile dị mkpa dị na kọmpụta ahụ, ị ​​nwere ike ịga n'ihu mmalite nke Yandex.Disk na usoro maka ịhazi ya.
Mepụta nchekwa ọhụrụ na ebe obibi gị ebe a ga-echekwa faịlụ mmemme niile. Nke a ga - enyere otu akamkdir ~ / Yandex.Disk.
Wụnye Yandex.Disk siteyandex-disk setupma họrọ ma ọ bụ iji ihe nnọchiteanya proxy. Ọzọkwa a ga-enye gị ịbanye nbanye na paswọọdụ maka itinye aka na usoro na ịtọ usoro nhazi. Naanị soro ntuziaka a gosipụtara.
A na-ebuli onye ahịa ya aka site na iwu ahụyandex-disk mmalitena mgbe ọ gbanyeghachiri kọmputa ahụ ọ ga-agbanye na-akpaghị aka.
Nzọụkwụ 3: Wụnye ihe ngosi ahụ
Ọ naghị adị mfe mgbe niile ịmepụta ma hazie Yandex.Disk site na njikwa ahụ, yabụ anyị na-atụ aro na ị gbakwunye akara ngosi ahụ na usoro ahụ, nke ga-enye gị ohere ịrụ ọrụ na mmemme ahụ. A ga-ejikwa ya nye ikike, họrọ nchekwa ụlọ na omume ndị ọzọ.
Ịkwesịrị iji faịlụ site n'aka onye nkwụnye ọrụ. A na-ebunye ha na kọmputa site na iwu ahụsudo add-apt-repository ppa: slytomcat / ppa.
Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-emelite usoro ụlọ akwụkwọ ndị ahụ. Òtù ahụ nwere ọrụ maka nke a.sudo apt-nweta mmelite.
Ọ na-anọgide nanị iji chịkọta faịlụ niile n'ime otu usoro site na ịpịsudo apt-nweta wụnye ngwaọrụ-ngwaọrụ.
Mgbe akpaliri ịtinye nchịkọta ọhụrụ, họta D.
Malite site na njirimara site na ede na "Njedebe"yandex-disk-indicator.
Mgbe sekọnd ole na ole, windo nwụnye Yandex.Disk pụtara. A ga-ajụ onye mbụ ma ọ bụ iji onye nnọchiteanya proxy.
Ọzọ, ị ezipụta nchekwa nchekwa maka faịlụ faịlụ ma ọ bụ mepụta ọhụụ ọhụrụ na ndekọ ụlọ.
Ụzọ na faịlụ ahụ na akara na-ahapụ ọkọlọtọ ma ọ bụrụ na ịchọghị ịgbanwe ya.
Nke a mezue usoro nhazi ahụ, ịnwere ike ịmalite akara site na akara ngosi nke a ga-agbakwunye na menu mgbe emechara usoro ahụ.
N'elu elu, a kpọbatara gị na nzọụkwụ atọ nke ntinye na ịhazi Yandex.Disk na Ubuntu. Dị ka ị nwere ike ịhụ, ọ dịghị ihe dị mgbagwoju anya na nke a; ị ghaghị ịgbaso ntụziaka niile nke ọma, ma geekwa ntị na ederede ahụ, nke nwere ike igosipụta mgbe ụfọdụ na njikwa. Ọ bụrụ na njehie emee, gụọ nkọwa ha, kpebie n'onwe gị ma ọ bụ chọpụta azịza ya na akwụkwọ ikike nke sistemụ.
Ịwụnye akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na Windows 10
Lelee ozi gbasara mmelite na Windows 10
Naputaghachi akwukwọ a na-azoputaghi
Otu esi amụta ịrụ ọrụ na kọmputa
Anyị na-agbanwe ọnọdụ alụmdi na nwunye nke VKontakte
Ụfọdụ kọmputa na-ekpo ọkụ dị elu n'oge ọrụ. Mgbe ụfọdụ, ihe ndị dị otú ahụ adịghị ekwe ka ịmalite sistemụ arụmọrụ ma ọ bụ ịdọ aka ná ntị gosipụtara na ntanetị mmalite, dịka ọmụmaatụ, "Error CPU Over Temperature". N'isiokwu a, anyị ga-akọwa otu esi achọpụta nsogbu nke nsogbu dị otú ahụ na otu esi edozi ya n'ọtụtụ ụzọ. GụKwuo
Wepụ Windows 8
Obere igwe na Windows 10